Farmaajo iyo Rooble oo Shir la isugu keenay (Akhriso Mas'uuliyiinta kasoo shaqeysay iyo Codsiga Farmajo ka..) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Farmaajo iyo Rooble oo Shir la isugu keenay (Akhriso Mas’uuliyiinta kasoo shaqeysay iyo Codsiga Farmajo ka..)
Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo Ra’iisal wasaaraha xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble kulan fool ka fool ah la isugu keenay maanta, iyadoo uu shir uga socdo Xarunta Madaxtooyada.
Shirkan ayaa ka danbeeyay talo soo jeedin ka timid guddoomiye ku xigeenka Golaha Shacabka C/weli Ibraahim Muudey, waxaana kulankii xalay dhex maray Ra’iisal wasaaraha iyo Taliyeyaasha ciidamada kadib kulan kale Farmaajo la yeeshay xubno uu hoggaaminayo C/weli Muudey oo uu ka mid yahay Agaasimaha cusub ee NISA, ayna wehliyeen taliyeyaasha ciidamada.
Wararka la helay ayaa sheegaya in Farmaajo uu ogolaaday xil ka qaadista agaasimaha NISA Fahad Yaasiin, balse uu xubnihii la kulmay ka codsaday inay u keenaan Ra’iisal Wasaare Rooble si arrintan looga wadahadalo.
Kulanka u socda Farmaajo iyo Rooble oo ay ku wehliyaan C/weli Muudey, Bashiir Goobe iyo taliyeyaasha ciidamada ayaa la filayaa in looga hadlo kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo ku maqan Hay’adda NISA iyo xil ka qaadista Fahad Yaasiin, iyadoo Farmaajo uu tanaasul ka muujiyey qeyb ka mida.
Previous articleAbwaan Guure oo kashifay Hees uu Farmaajo Lacag ku bixiyey markii muddo kororsiga sameystay
Next articleDaalibaan ayaa ku dhawaaqday Xukumaad Islaami ah oo Kumeelgaar ah (Akhriso Xubnaha Dowladda)